FORSYTHIA (FORSYTHIA) MA BARO, WAXA LA SAMEEYO KIISKAN - SOOSAARKA DALAGGA
Forsythia (magaca kale - Forsythia)- geedo qurxoon oo qurux badan, xubin ka mid ah qoyska olive, taas oo abuuri doonta dareen cajiib ah oo diirimaad iyo guga maalmaha ugu horeeya diiran. Dhirta qorraxda-cadceedu ma aha oo kaliya hagaajinta muuqaalka qurxinta beertaada, laakiin sidoo kale waxay ka dhigi doontaa indho cad oo ka dhexjirta dhammaan dadkaas. Laakiin geedka this mar walba ma awoodaan in ay ka farxiyaan ubax qurux badan oo qurux badan, iyo in this article waxaan isku dayi doonaa in la go'aamiyo sababta forsythia ma Bloom, iyo magaca sababaha ugu badan ee this.
Ma taqaanaa? Ma aha dhammaan noocyada forsythia u dulqaadan kara cimilada adag ee gudaha, waxaa ugu wanaagsan in ay qaboobaan qaboobaha forsythia Giralda (ilaa 35 digrii oo daxan) iyo Siezold forsythia.
Resistance forsythia cudurada iyo cayayaanka
Forsythia, iyada oo aan loo eegin inta jeer ee uu blooms (inta badan 22-25 maalmood), si ka duwan ubax kale beerta, warshad waa aan qabyo ahayn. Inkasta oo wakhtigii hore ee muuqaalka ubaxyada hore, baadiyaha uma baahna dadaal titanic ah ee daryeelkooda. Inta badan forsaytiya bannaanka u khatarta cudurada.
Waxa kaliya ee uu baadiyaha ka baqaya iyo waxa sababa badan oo cudurada waa dheecaan ah qoyaan, laakiin xilli qalalan waxay dareemaysaa raaxo leh. Sidaa darteed, cudurka caanka ah ee ugu badan ee forsythia waa kallana yaryar, taas oo aad u adag in lagu daaweeyo, laakiin si fudud looga hortago.
Waa muhiim! Haddii uu jirkadaada ku jiraa uu jiran yahay, waxaa laga yaabaa in uu ka soo baxo caleemaha (cidhibta lafteeda ayaa calaamadaysa, midabku waa la jeexay, caleemaha ayaa la jarjaray), ka dibna dabacsanaanta ciidda waxay hagaajineysaa xaaladda, oo ugu dambayntii ka takhalustaa dhibaatada, baadiyaha waa in la qodaa oo laga saaraa dhammaan caleemaha dhaawacmay.
Cudur kale oo halis ah oo dhaawici kara forsythia waa bacteriosis, taas oo khatar ah sababtoo ah waxay si deg deg ah ugu faaftaa duurka ugu dhaw. Haddii cudurkani uu horayba u waxyeeleeyay dhirtaada, ka dibna hal waddo: si aad u xoqdo geed, dib u habeyn, iyo jeermiska meesha aad ku jirtey "ku noolayd" xal xoog leh oo kaneeco ah.
Laakiin cayayaanka nool, qaababka badanaa waxay weeraraan nematodes (cayayaanka ku yaala lakabka sare ee carrada waxayna dhaawici karaan nidaamka xididka). Waxaad la dagaalami kartaa nematodes adoo daaweynaya baadiyaha iyo ciidda agagaarka baadiyaha leh Carbation.
Cayayaanka ku xiga, laga yaabee mid ka mid ah kuwa ugu caansan dhirta beerta oo idil, waa aphid, taasoo waxyeeleysa caleemaha.
Shimbiraha jecel inay cunaan burooyinkooda dhirta ah ee aan la furin waxay sidoo kale keeni karaan dhaawac aan loo baahnayn geedka, sidaas darteed, si looga hortago, waxay u fiicantahay hoyga xilliga dayrta iyo daboolida jir iyo caleemo leh mesh ganaax ka hor inta uusan ubbooyinku furmin.
Sida aad u arki karto, gobolka ofsythia waxay si toos ah ugu tiirsan tahay tayada iyo waqtigeeda daryeelka caafimaad ee la siiyey.
Maxaad uheshay forsythia Bloom: iftiin ku filan
Waxaa jira dhowr sababood oo ah sababta keentay forsythia si liidata, midka ugu muhiimsani waa qadar yar oo iftiin ah. Warshad kasta waxay u baahan tahay meel ku haboon si ay u noolaato, xulashada taas oo ku salaysan ma aha oo kaliya tayada ciidda, laakiin sidoo kale on deriska kuwaas oo ku soo baxa baadiyaha, iyo iftiinka.
Forsythia - Buunku waa mid aad u dhalaalaya, wuxuuna u baahan yahay iftiin isku mid ah, marka laga reebo, waa heer kulul. Dabcan, geedka ma dhiman doono sababtoo ah waxa uu ku koraa hooska qayb ahaan, laakiin maaha wax in ubaxyo forsythia loo yiraahdo "janarka dahabka" ama "lilacs gold". Forsythia Blooms aad u dhalaalaya oo cad, iyo in penumbra midabka ayaa lumin doonaa tayada.
Ma taqaanaa? Haddii ay sidaas dhacdo in forsythia joojiyo ubaxu, ka dib marka xalinta dhibaatadan waa in ay tixgeliyaan xaqiiqada ah in deriska ee forsythia ka hortagi karaan helitaanka ku filan oo iftiin ah, iyo xitaa beerashada kooxeed waxaa ka wanaagsan inaad beerto forsythia fogaan ah 1.5-2 mitir ee kulaylka aan kulaylka .
Isticmaalka lacag la'aanta ah ee qorraxdu waxay noqonaysaa ka hortag wanaagsan oo rooti ah, sababtoo ah iftiin fiican, qoyaan badan ayaa uumi saari doona si dhakhso ahna ma jiri doono biyo la'aan.
Sida caleemo kale oo beerta kale ah, Forsythia jecel yahay meesha ay ku diiriso oo ay dhalaalayso, oo, ay bixiso labadan xaaladood, waxaad heli doontaa warshad cajiib ah oo ku farxi doonta isha muddo dheer.
Cillado markaad waraabiyo iyo quudinta forsythia
Inta badan ayaa laga helaa su'aalaha bannaanka bogagga: sida loo sameeyo blot forsythia, haddii quudin dheeraad ah loo baahan yahay, sida si fiican u waraabiyo. Forsythia uma baahna waraabin badan; waraabinta dhirta saddexdii maalmoodba mar, baaldi biyo ah oo ka hooseeya hal baadiyaha xaaladaha abaarta daran.
Iyada oo jawi cimilada iyo cimilada caadiga ah, qoyaanka ku jira ciidda waa ku filan baadiyaha. Si looga fogaado dhibaatada luminta ubaxa tayada sababtoo ah biyo diirinta, waxaa lagama maarmaan ah in la bixiyo lakabyo qulqulaya inta lagu guda jiro beerashada, iyadoo la isticmaalayo walxo la iibsaday, ama lebbaal casi ah, peat, caano. Haddii mashiinka forsythia uu aad u qoyan yahay ama aad u qallalan yahay, ma aha oo kaliya midabka midabkiisu wuu yaraanayaa (waxay noqon doontaa mid aad u sii badan, midabka huruudka ah ee dhalaalaya wuxuu noqon doonaa mid yar), laakiin caleemaha ayaa sidoo kale lumin doona muuqaal qurxoon.
In kasta oo xaqiiqda ah in forsythia aysan qabin daryeel, waxay weli u baahan tahay bacarimiso. Waxaad u baahan tahay inaad si sax ah u quudiso: haddii xilliga dhirta hore, maaddooyinka nitrogenous si fudud loo baahan yahay, ka dibna marxaladaha ku xiga ee bacarimiso waxay kaliya dhaawaceysaa, iyo baadiyaha ayaa lumin doonaa midabka midabka.
Aad bay muhiim u tahay xulashada habboon ee bacrimin forsythia noqon doonaa xaqiiqda ah in haddii ciidda ku filan acidic, ka dibna lime slaked, kaas oo waa in loo rogaa habka xididka ah ee ubax iyo kobcinta wanaagsan, iyo sidoo kale caadiga ah heerka heerka pH, waxay u dhaqmi karaan sida walxo dheeraad ah.
Waa muhiim! Waxa kale oo muhiim ah in aan ku dhaafin bacriminta forsythia, maaddaama tani waxay horseedi doontaa luminta midabka iyo kordhinta caleemaha qaro weyn.
Ula-hoggaansanaan la'aanta xeerarka manjooyin waa qaladka ugu weyn ee bannaanka u ah.
Mid ka mid ah qodobada ugu muhiimsan ee daryeelka forsythia waa gooyo. Xitaa kuwa bilawga ah waxay ka warqabaan muhimadda geeddi-socodkan, ma aha oo kaliya dib-u-nooleynta, laakiin sidoo kale dib u habeeynta baadiyaha. Inta badan, sababtoo ah manjooyin aan habboonayn, joojin ubax, iyo tani waa sababta oo ah onsthia ubax baadiyaha ubax waxay ku yaalaan on caleemaha laba sano, iyo sidaas darteed, haddii biqilka gaaban qaldan, waxaad ka saari kartaa ubax aan la furin laftiisa.
Si manjooyin loo guulaysto, waxaa fiican in la qaado si tartiib tartiib ah, iyada oo aan laga saaro dhammaan caleemaha jir ah mar.
Waa muhiim! Kuwa bilowga ah ku talinayaan manjooyin ka dib ubax, oo aan isaga ka hor.
Gooyo - Meel aad u muhiim ah ee beerista forsythia, sababtoo ah haddii geedka "ordaya", markaa helitaanka qorraxdu waxay noqon doontaa mid ka yar, iyo nidaamka xididku "qashin" xoogaa caleemo aan loo baahnayn.
Waa xaalad ahaan suurtogal ah in loo kala qeybiyo nidaamka xoqidda saddexda marxaladood:
xakamaynta laamihii hore;
yareynta laamihii hoos u dhacay (by saddexaad).
Dareemidda sharciyada dhirta jiilaalka
Inta badan bannaanka u dayacan tayada hoyga, kaas oo loo dhisay baadiyaha ah jiilaalka, iyo natiijada waxay tahay in kaliya laamaha hoose ee Bloom xilliga dayrta ama ubax guud ahaan noqonayaa mid aad u sii xumaanaya. Fikradda ah in farxad gaar ah oo ku saabsan "saqafka" aan loo baahnayn Forsythia waa waxoogaa khalad ah, sababtoo ah laamuhu ma aha uun barafka, laakiin haddii aanay ku filnayn gaboodfalka, shimbiraha in ay joogaan xilliga jiilaalka.
Caadi ahaan, waxay daboolaan wareegga garabka ee jiilaalka oo daboolaya laanta. Waxaad u maleyneysaa: sidee baad u dabooli kartaa baadiyaha ku filan? Aad u fudud: laamuhu si tartiib ah ayey ufududaan.
Ma taqaanaa? Sida hoyga, waxaa fiican inaad isticmaasho wax keliya oo khudradda ah oo u ogolaanaya hawada inay ka hortagto kelyaha ka soo baxa waqti hore.
Haddii ay sidaas dhacdo in aad isticmaashay wax aan la taaban karin, ka dibna ka saar meesha hoygaas loo baahanyahay si tartiib tartiib ah. Guryaha dheeraadka ah waxaad isticmaali kartaa baraf.
Sida aad u aragto, caafimaadka caleenta iyo muuqaalkiisa wuxuu ku xiran yahay xannaanada uu dhirta helo, waxaana rajeyneynaa in maqaalkani uu kaa caawin doono inaad si sax ah u daryeesho forsythia.